Evaporative Condenser, Kuchenesa Shongwe, Kurapa Kwemvura - Yubing
Kutonhorera kwedu kwakashandiswa zvakanyanya munzvimbo dzakasiyana kuti dzibatanidzwe pamwe neakatsiga zvigadzirwa.
Kugadziriswa kwakaderera uye mutengo wemagetsi mhedzisiro yedhizaina-isina dhizaini dhizaini.
Nguva dzose funga nezve yakanyanya kudhura-inoshanda pamusoro pehupenyu hwese kutenderera.
Tevera yakavimbika manejimendi manejimendi uye nekukurumidza kupindura mumashure-kutengesa sevhisi.
Unyanzvi Kugadzira weKutonhora Shongwe Sisitimu
High-kunyatsoshanda Evaporative Condenser kuti Indus ...
Ice Maindasitiri Reverse Osmosis Sisitimu yeCooli ...
Kubudirira Kwakanyanya & Kuchengetedza Simba
Deredza iyo system simba, kushandiswa kwemvura, kugadzirisa uye kuisa mari ine yakanyanya kutonhora kugona.
Kwidziridza mutengo-unoshanda pamusoro pehupenyu hwese kutenderera.
Chivhariso uye utambe dhizaini mhedzisiro mune yakapusa, ine mari yekuisa.
Kunogara uye Kuvimbika
Isina-kukanganisa, hupenyu hwakareba uye huremu huremu.
Shongwe dzinotonhora dzinowanzoiswa mukati meindasitiri seimwe yezvinhu zvakakosha pamwe nemamwe machina akawanda anorema muchikamu chemaindasitiri icho chaigaro kuve nechekuita mukugadzira, kugadzirisa kana kuunganidza zvigadzirwa. Maitiro akasiyana emaindasitiri anoita kuti mvura ipise iyo inoputirwa mumatanho anotonhora. Iwo anotonhorera emabhaizi eshongwe anosasa mvura inopisa mu "zadza midhiya" uko kune yakakwana nzvimbo nzvimbo uye izvi zvinotungamira kune yemvura-yemhepo kusangana kuti itonhorere mvura. Shongwe dzinotonhora dzinoshandiswa zvakanyanya munzvimbo dzekuchenesa mafuta, petrochemical zvinomera, magetsi emagetsi, zvinomera zvenyukireya, zvigadzirwa zvekugadzira chikafu, gasi rechisikigo nezvimwe.
Tingave tichifara kugamuchira zvamubvunza uye nekupa rubatsiro rwekukurumidza.
Shongwe dzinotonhora dzinonyanya kushandiswa kupisa, kufefetedza, uye kutonhodza mweya (HVAC) uye zvinangwa zveindasitiri. Inopa inoshanda-isingadhuri uye inovheneka mashandiro esisitimu inoda kutonhora. Zvinopfuura 1500 maindasitiri anoshandisa huwandu hwakawanda hwemvura kutonhodza zvirimwa zvavo. HVAC ...
Kune emakambani emaindasitiri anoshandisa iyo inotonhorera shongwe kwenzvimbo yayo, imwe mhando yekutonhora shongwe yekurapa mvura sisitimu inowanzo kuve yakakosha kuti ive nechokwadi cheyakanaka maitiro uye hwakareba hupenyu hwekushandisa hupenyu. Kana kutonhora kweshongwe mvura ikasiiwa isina kurapwa, organic kukura, kusvibisa, kuwedzera, uye ngura inogona r ...
Yekutanga Sumo yeKutonhodza Towers
Iyo inotonhorera shongwe chinopisa kupisa, mukati mayo kupisa kunodzingwa kubva mumvura nekubatana pakati pemvura nemhepo. Kutonhora shongwe dzinoshandisa mvura kubuda kwemvura kuramba kupisa kubva munzira senge kutonhora iyo inotenderera mvura inoshandiswa mumafuta ekuchenesa, makemikari zvinomera, magetsi emagetsi, simbi mil ...